‘फ्ल्यागशीप किलर’को नयाँ क्षितिज
चिनियाँ स्मार्टफोन ब्रान्ड वान्प्लसले पछिल्लो फ्ल्यागशीप स्मार्टफने भर्सन वनप्लस सिक्स टी सार्वजनिक गरको छ । खचाखच भरिएको बडेमानको हलको लाइभ कार्यक्रमकाबीच अमेरिकाबाट यसको सार्वजनिक गरिएको हो । यो वनप्लसको नऔं स्मार्टफोन हो भने टि भर्सनको तेस्रो मोबाइल हो ।
भिभोको भी ११ ले अन स्क्रीन फिंगरप्रिन्ट सेन्सरवाला मोबाइल सार्वजनिक गरिहँदा पाँच महिनाअघि यो सुविधा नभएको वनप्लस सिक्स सार्वजनिक गरेको थियो । तर उपभोक्ताका गुनासाको सुनुवाइ गरेकै सैलीमा वनप्लस सिक्स टी बजारमा ल्याएको छ वनप्लसले, त्यो पनि चलेका स्मार्टफोनका फिचरसहित र थप परिस्कृत पनि ।
वान्प्लस सिक्स टीमा हेडफोन ज्याक हटाइएको छ भने अन स्क्रीन फिंगर प्रिन्ट, ३७०० एमएएच ब्याट्रि र गोरिल्ला ग्लास ६ प्रोटेक्सन नयाँ वा अपग्रेडेट हो भने नच पनि वाटरड्रपमा छ । क्यामरा क्वालिटी सिक्स र सिक्स टिको एउटै छ भने स्न्यापड्रागन पनि दुबैमा ८४५ नै हो ।
गत सोमबार अर्थात् २९ अक्टोबर २०१८ मा चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्ड वान्प्लसले पछिल्लो फ्ल्यागशीप स्मार्टफने भर्सन वनप्लस सिक्स टी सार्वजनिक गरको छ । खचाखच भरिएको बडेमानको हलको लाइभ कार्यक्रमकाबीच अमेरिकाबाट सार्वजनिक गरिएको हो । यो वनप्लसको नऔं स्मार्टफोन हो भने टि भर्सनको तेस्रो मोबाइल हो ।
नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेसँगै वनप्लसले आफ्नो ‘फ्ल्यागशीप किलर’ वाला छविलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । नम्बर दुई मोबाइल ब्रान्ड सामसुङ र एप्पलका फ्ल्यागशीप स्मार्टफोनले लाख हुँदै डेडलाख नेपाली मुल्य भन्दा पनि उकालो लाग्ने क्रममा छन् । ती फ्ल्यागशीपका मुख्य फिचरहरू र थप अन्य उत्कृष्ट फिचरसहित वनप्लसले भने अझै पौने लाखकै वरपरिपरिकै मूल्यमै फ्ल्यागशीप स्मार्टफोन बजारमा ल्याइरहेको छ । भिभोको भी ११ ले अन स्क्रीन फिंगरप्रिन्ट सेन्सरवाला मोबाइल सार्वजनिक गरिहँदा पाँच महिना अघि यो सुविधा नभएको वनप्लस सिक्स सार्वजनिक गरेको थियो । तर उपभोक्ताका गुनासाको सुनुवाइ गरेकै सैलीमा वनप्लस सिक्स टी बजारमा ल्याएको छ वनप्लसले, त्यो पनि चलेका स्मार्टफोनका फिचरसहित र थप परिस्कृत पनि । विश्वका ३४ मुलुकमा हाल वनप्लसको आधिकारिक विक्री भइरहेको छ ।
पेटे लेउ र कार्ल पेइले संस्थापन गरेको फ्यान बेस ब्रान्ड वनप्लसको छोटो समयमा हात पारेको सफलता लोभलाग्दो देखिन्छ । सन् २०१४ यता वर्षमा दुई वटाको दरले फ्ल्यागशीप स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत वर्ष मात्र १.४ विलियन डलरको कारोबार गरेको छ । कम्पनीको कमाइ पैसामा मात्र नभइ उपभोक्ताको विश्वास जित्नु अझै बढी गज्जवको छ । फ्यान बेस कम्पनीका रूपमा परिचित वनप्लसले मार्केटिङमा भन्दा पनि सिधै उपभोक्तासँग सम्पर्क स्थापित गरेर आफ्नो सफलताको सिंढी चढिरहेको देखिन्छ । वनप्लस कम्युनिटी यसकै उपज हो । उपभोक्ताको रचनात्मक सुझावलाई अंगिकार गरि स्मार्टफोनमा फिचर थपघट गर्ने गरेकाले पनि फ्ल्यागशीप फोनका उपभोक्ताको मन वनप्लसले जितेको मान्न सकिन्छ ।
वान्प्लस अब टी अमेरिकन नेटवर्कमा
चीनको सेन्जेनमा मुख्य कार्यालय रहेको बीबीके इलेक्ट्रोनिक्सको वनप्लस ब्रान्डले अब अमेरिकन क्यारियरमा औपचारिक स्थान पाएको छ । युरोप अमेरिका केन्द्रीत बजारीकरणको नतिजास्वरूप कम्पनीले अमेरिकाको प्रमुख टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी मध्यमा पर्ने टी मोबाइल अन्तर्गत औपचारिक कारोबार हुने एप्पल र सामसुङका केही उत्पादन मात्र नभएर वनप्लस सिक्स टी पनि परेको हो । अक्टोबर २९ तारिकमा अमेरिकामा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको वनप्लस सीक्सका भेरियन्टहरू अमेरिकन क्यारियर एटी एन्ड टी र भेरिजनबाट समेत किन्न सकिनेछ । पहिलो पटक अ‍ेरिकन क्यारियरमा स्थान पाएको वनप्लस को सिक्ट टी मोबाइल किन्न टि मोबाइल स्टोरमा लामो लाइन लागेको छ ।
विश्वका चर्चित प्रविधि केन्द्रीत संचारमाध्यमले यतिबेला वनप्लस सिक्स टी को समाचारलाई प्राथमिकताकासाथ प्रकाशमा ल्याइरहेका छन् । “टाइम स्क्वायरमा रहेको टी मोबाइलको फ्ल्यागशीप स्टोरमा वनप्लस सिक्स टि किन्न पर्खिरहेकाको लामो लाइन लागेको छ,” चर्चित टेक मिडिया विजनेस इन्साइडरलले लेखेको छ, “यो नयाँ आइफोन किन्दा लाग्ने लाइन भन्दा लामो लाइन हो ।” बिजनेस इन्साइडरले ८ सय डलर भन्दा बढी मूल्य पर्ने अन्य फ्ल्यागशीपमा पाइने उत्कृष्ट डिजाइन, स्पेसिफिकेसन र पर्फमेन्स सोमबार सार्वजनिक गरिएको भन्दा ६ सय डलर भन्दा कम मूल्यमा पाइने वनप्लस सिक्स टीमै पाइने चित्रण बिजनेस इन्साइडरको छ । वनप्लसले वेलायति क्यारियरमा पनि स्थान पाइसकेको छ ।
एसियामा पनि चम्किँदै
कुनै समय सस्तो तर डुप्लीकेट सामान वानउने मुलुकको पहिचान थियो चीनको । खासगरि भारत र नेपाल लगाएतका एसियन मुलुकमा कतिपय जनताको मस्तीस्कबाट अझै यो छवि हट्न बाँकी छ । कतिपय मुलधारदेखि साउथ इन्डिएन फिल्मका डाइलकमा ‘चिनिया माल जस्तो’ भनेर गरिएका ब्यंग्य मेट्न नमिल्ला तर चिनिया नयाँ ब्रान्डहरूले चिनले ब्रान्डेड सामान उत्पादन गर्छ भन्ने विश्वास भने उपभोक्तामाझ स्थापित गराएका छन् । उपभोक्ताको प्रतिक्रिया हेर्दा लाग्छ एसियन मुलुकका चिनिया उत्पादन प्रतिको विश्वास जगाउनमा मोबाइल ब्रान्डहरूको भुमिका नै भुमिका मुख्य देखिन्छ । अन्य चिनिया कम्पनी (सायद ति भन्दा बढी) जस्तै वनप्लसले पनि युरोपियन र अमेरिकन मुलुकमा ब्रान्डिङ गरेपछि मात्र एसियन बजारमा छिरेको छ ।
वनप्लसले वनप्लस फाइभ यता भारतीय बजारबाट यसको मार्केटिङ तिब्र पारिएपछि एसियामा पनि फ्ल्यागशीपमा वनप्लसको माग उच्च वान्ेको छ । दर्जनौं चिनिया र विश्वका अन्य कम्पनीहरूले नेपालमा आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक गरिरहँदा वनप्लसले पनि छिटै नै नेपालमा आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक गर्ने योजना वानएको सम्वद्ध स्रोतहरूको भनाइ छ । यद्यपी भारतीय बजारहुँदै र चिनबाट सिधै नेपाली बजारमा भित्रनेदेखि युरोप, अमेरिकाबाट वनप्लसका उत्पादन मगाएर बोक्ने नेपालीको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइन्छ । कुनै समय ‘वनप्लस कुन कम्पनीको फोन हो?’ भनेर सोध्ने नेपालीहरूले ‘वनप्लस त राम्रो छ रे नि है?’ भन्न थालेपछि नेपालमा पनि वनप्लसलाई फ्ल्यागशीप किलरकै रूपमा स्वीकारिएको भान हुन्छ ।
वान्प्लस सिक्स टिमा के छ ?
वनप्लस फ्यान र फ्ल्यागशीप अपग्रेड गर्न चाहने उपभोक्ताका लागि वनप्लसको नयाँ उत्पादन बडो चासोको विषय पनि हो । सन् २०१४ को अप्रिलमा सार्वजनिक गरिएको वनप्लसको पहिलो स्मार्टफोन नै त्यतिबेलाका अन्य फ्ल्यागशीप भन्दा निकै सस्तो र धेरै फिचर भएको थियो । यसकै निरन्तरता स्वरूप हाल आएको सिक्स टि मा पनि स्मार्टफोन मार्केटमा चलेका सबैखाले सुविधा समेटिएको त छ नै यसको मूल्य पनि विगतका भर्सनहरू झैं धेरै नबढेरै आएको छ । ३ जीवी ¥याम, १६ र ६४ जीवी स्टोरेज, स्न्यापड्रागन ८०१ चिपसेट, एन्ड्रोइड भर्सन ४ (६.१ मार्सल्लोसम्म अपग्रेडेबल), १३ मेगापिक्सेल रियर र ५ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा, गोरिल्ला ग्लास ३, १०८० गुणा १९२० पिक्सेलेको ५.५ इन्चको डिस्प्ले, ३१०० एमएएच ब्याट्रि लगाएत सुरुको वनप्लसको फिचर थिए । वनप्लस फाइभसम्म आइपुग्दा सबैखाले फिचर अपग्रेड भएर आएका छन् ।
वनप्लस सिक्स टीमा धेरै फिचर सिक्समा भए अनुसार छन् भने केही अपग्रेट गरिएको छ । सिक्स टीमा ६ र ८ जीवी ¥याम, १२८ र २५६ जीवी स्टोरेज, स्न्यापड्रागन ८४५ चिपसेट, एन्ड्रोइड ९, १६ र २० मेगापिक्सेलको डिउल रियर क्यामरा र १६ मेगापिक्सेलको सेल्फी क्यामरा, गोरिल्ला ग्लास ६ प्रोटेक्सन, १०८० गुणा २३४० पिक्सेलको ६.४९ इन्चको डिस्प्ले, ३७०० एमएएच ब्याट्रि लगाएत छन् । सिक्स टीमा हेडफोन ज्याक हटाइएको छ भने अन स्क्रीन फिंगर प्रिन्ट, ३७०० एमएएच ब्याट्रि र गोरिल्ला ग्लास ६ प्रोटेक्सन नयाँ वा अपग्रेडेट हो भने नच पनि वाटरड्रपमा छ । क्यामरा क्वालिटी सिक्स र सिक्स टिको एउटै छ भने स्न्यापड्रागन पनि दुबैमा ८४५ नै हो । वनप्लस सिक्समा ३३०० एमएएच ब्याट्रि रहेकोमा टीमा भने ४०० एमएएच बढी राखिएको छ ।
मूल्य स्थिरमै अपग्रेड ?
वनप्लसको विशेषता भनेकै नयाँ उत्पादन पनि पुरानो भन्दा थोरै बढी मूल्यमै उपलब्ध गराउनु रहेको छ । पुरानो नयाँको मूल्य अन्तर ५ देखि १० हजार नेपाली मूल्यको सेरोफेरोमै रहदै गरेको विगतको अभ्यास छ । विश्व बजारमा विक्री सुरु भइसकेको वनप्लस सिक्स टीको सुरुवाती मूल्य अन्तराष्ट्रिय मूल्य ४९९ पाउन्ड अर्थात् ५४९ डलरदेखि ५७९ पाउन्ड अर्थात् ६२९ डलर तोकिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भारु ३७ हजार ९९९ देखि ४१ हजार ९९९ भारुमा अमेजिन डट इनबाट किन्न सकिन्छ । नेपालमा भने अझै तीन देखि चार हप्तामा वनप्लस सिक्स टीको औपचारिक विक्री हुने नेपालका लागि आधिकारिक अनलाइन विक्रेता ओलिज स्टोरले जनाएको छ । नेपालमा वनप्लस सिक्स टीको मूल्य कति पर्छ र ठ्याक्कै कहिले भित्रन्छ भन्ने भने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।
नेपालमा अपौचारिक र अनौपचारिक दुबै बाटोबाट ग्याजेटहरू भित्रने गरेका छन् । औपचारिक रूपमा आधिकारिक विक्रेताले नेपाल भित्र्याउनु अघि नै अनौचारिक रूपमा भने विश्व बजारमा सार्वजनिक भएका ग्याजेट एक देखि दुई सातामा नेपालका फ्यानहरूको हातमा परिसक्ने गरेको पाइन्छ । वनप्लसको वनप्लस फाइभ र फाइभ टि पनि अब सेकेन्ड हेन्डमा मात्र फाट्ट फुट्ट पाइन्छ । सिक्स भने नेपाली बजारमा औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा कारोबार भइरहेको छ । नेपालमा वनप्लसको अर्को भर्सन वनप्लस सेभेन आइनपुग्दासम्म वनप्लस सिक्स र सिक्स टिले नै फ्ल्यागशीप मार्केटमा उपस्थिति जनाइरहने देखिएको छ ।